Semalt Inopa Zvitatu Zvitsva Zvokudzivirira Kuvhara Malware Pop-Ups And Spam
Kana iwe uchitarisa internet zuva rega rega, unofanirwa kuziva nezvep-up ads, malware, uye spam. Izvi zvinoshamisa zvishambadzi zvinouya nenzira dzakasiyana uye dzinoedza kukutengesa iwe michina yakasiyana kana mabasa. Kunyange zvazvo emaimeri uye mapepa emakambani nemabhizimisi anoremekedzwa ari akakodzera uye akachengeteka, zvirongwa zveadware zvinokonzera mishonga yezvinyorwa zvisina kuwanikwa spam uye pop-ups ichaisa spyware uye inopamba web browser yako - le service paie ou paye. Vachakubatawo mashoko enyu ega ega, zvakadai sekadhi rechikwereti uye PayPal ID.
Oliver King, the Semalt Mutevedzeri weMutengi weVatengi, anoti email isina basa kana kuti spam ndiyo fomu yevashambadziri inodhindwa. Kana bhokisi rako remukati rine mitoro yemashoko kubva kumakambani kana vanhu vausingazivi, unogona kunge une malware pakombiyuta yako. Mamwe mapepa e-instant and emails ava nzira yakakurumbira yekuparadzira malware ne spyware. Izvo zvinotyisa zvinokunyengera mumabasa asina kunaka uye kutumira mazhinji emajeri asina maturo uye asingabatsiri anenge mazuva ose. Google inowirirana kuti mamiriyoni emamiriyoni emamiriyoni e spam anotumirwa zuva rega rega, asi zvinobvira kubvisa malware pop-ups uye spam mumatanho matatu akareba.
Danho 1: Bvisa mapurogiramu asina kudiwa kubva kuGoogle Chrome browser (Windows chete) :(
Kana uri kushandisa Linux kana Mac device, iwe unogona kunge usina kubatsirwa kubva pane danho iri..Uye kana iwe uri kushandisa Google Chrome semavhuraji enyu makuru, unogona kubvisa nyore nyore kana kudzivirira mapurogiramu asina kuwanikwa uye spam nenzira dzinotevera:
Isai plugin yakafanana neAdblock Plus uye bvisa mapurogiramu ose asina kudiwa nekusarudza paObvisa sarudzo. Google Chrome ichakubatsira kuti ubvise malware, ita zvigadziri kuti zvisiyane uye kubvisa zvandandise.
Usakanganwa kutangazve kombiyuta yako kana waisa uye wakashandisa iyi plugin.
Kushandura zvikwata zvaunovimba nazvo, enda kune Zvimwe Zvimwe - Zvimwe zvekuwedzera uye sarudza paIndaneti.
Danho 2: Bvisa mapurogiramu asina kudiwa pamakombiyuta ose:
Kana iwe uchangobva kutenga kana kukanda antivirus kana anti-malware purogiramu, unofanira kuimhanya kuti ubvise matangazo ep-up uye spam nokukurumidza.
Pamakombiyuta eM Mac, enda kuIfayili ye Folder uye chengeta paIndaneti yeApplications.
Tsvaga zvikwata zve pop-up kana spam hauzivi kana unoda kubvisa.
Tora paIndaneti kuenda kuTaskino uye bhura paIndisina Toro kuti ubvise malware pakarepo.
Danho rechitatu: Dzorerazve mamiriro ekushandura pamakombiyuta ose:
Unogona kugadzirisa zvakare shanduro yekushandura pane chero kombiyuta neipi inotevera:
Vhura Firefox kana Chrome browser pakombiyuta yako
Dzai pane Zvisarudzo uye shandisa kuZvipamusoro.
Nhanho inotevera ndeyokutora bhodhi reRefet uye chengetedza zviito zvako nekukanda paBhodzi rekuchengetedza.
Mharidzo ine malware kana spyware inogona kubva kune chero ipi zvayo, kuitira kuti ugone kuchinja nzira idzi dziri pamusoro apa kuti ubvise zvose. Pasinei nokuti unogamuchira tsamba dzinoshungurudza kana kuona mavhiringidzi anonyadzisa, iwe uchakwanisa kuvabvisa uye unonakidzwa nokushandura internet zvakachengeteka uye zvakachengeteka. Panguva iyi, haufaniri kumbomira kuzarura maimeri uye kutumira mameseji evasingazivikanisi vanotumira!